Kumiswa kwemaviri 26 inch yemagetsi bhasikoro | ebike Shuangye
musha Products electric bike electric mountain bike Kusungirirwa kwemaviri 26 inch motokari yvesikisi A6AH26-S
Mota: 36V / 48V 250W / 350W / 500W / 750W Hub Motor
Bhatiri: Lithium Bhatiri 36V / 48V 8Ah / 10Ah / 13Ah
Magiya: 7/9/21/27 Matinji
Mabhureki: Discs Kumberi & Kumashure
Kumiswa: Dual kumiswa (F / R)
Icho chiri chose-chinangwa chemagetsi bhasikoro iro richiri kutaridzika kunge bhasikoro asi rinonzwa senge jetti. Izvi electric bike shandisa yakamiswa maviri, 36v 350w brushless hub mota uye 36v 10ah yakavanzika bhatiri.
Multi function LCD kuratidza Yakagadzirwa uye yakabudiswa nefekitari yedu, zviri nyore kudzora unhu, inogona kuratidzira Kure, Mileage, Kutya, Voltage nezvimwe. Iwe unogona kuve nyore kushandisa iyo nebhuku.
Bateri yakavanzwa Isu tinoshandisa yakavanzika bhatiri dhizaini yerudzi urwu rwegomo yemagetsi bhasikoro. Iyo ebike furemu yakagadzirirwa uye inogadzirwa neyedu fekitori. Yakanyanya kukosha. Vazhinji vanhu havazozvizive ibhasikoro remagetsi pakutanga kwavo kuona. Bhatiri bhokisi rinobviswa kuitira kuti iwe ugone kuribhadharisa mubhasikoro kana zvakasiyana mukamuri rako.
Pamberi uye shure 160 diski reka Chengetedza iwe wakachengetedzeka kubva kune chero ipi zvayo yekukurumidzira nechemberi mukati mukati ma 3 mamita. Match with lever brake iyo yakagadzirirwa-magetsi paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge wakagadzika. Kuchengetedzwa kwebhasikoro kunowedzera zvikuru.
Rushless motokari Ipa ne250W / 350W yekumhanya yakamisikidzwa brushless mota, max kumhanya kuri kusvika 25-30km / h. Izvo zvine simba zvekuti haunetseke nezvemakomo kana nemhepo.
Yakawanda Magetsi Bike: 26 inch inopisa kutengesa emagetsi bhasikoro, yakazara kuturika yakasanganiswa vhiri gomo ebike, 26/28 inch guta magetsi bhasikoro, bhodhoro bhatiri yemagetsi yemakomo bhasikoro
Tags:electric bike 26 inch electric bike dual kusimisa magetsi bhasikoro
Prev: Mens matsva magetsi mabhasikoro A6AB26
Next: 48V500W gomo rebhazikoro gorosi A6AD26